Sharraxaada caymiska ilkaha | UnitedHealthcare Community Plan: Medicare & Medicaid Health Plans
La Soo Geliyay: Febraayo 10, 2020
Caafimaadka ilkaha ee wanaagsan waa muhiim, sababtoo ah wax badan ayuu saamayn ku leeyahay caafimaadkaaga guud. Balse daryeelka ilkaha wuxuu sidoo kale noqon karaa mid aad qaali u ah. Marka aad lacag la'aan tahay, waxaa laga yaabaa inaad damacdo inaad iska joojiso ama aad u gambiso aadista dhakhtarka ilkaha.
Daryeelka ilkaha ee joogtada ah laguma daboolo Original Medicare. Medicare Part A (Caymiska Isbitaalka) wuxuu kaliya bixiyaa oo kaliya adeegyada ilkaha ee aad hesho marka aad ku jirto isbitaalka. Haddii aad u baahan tahay inaad hesho daryeelka ilkaha oo degdeg ah inta aad isbitaalka ku jirto, Medicare waxaa laga yaabaa inuu daboolo daryeelkaaga ilkaha, balse sida kale hadday tahay ma daboolo.
Medicaid wuxuu daboolaa adeegyada ilkaha ee carruurta, gobolada qaarkood ayaa sidoo kale bixiyaan caymiska Medicaid oo dhamaystiran ee dadka waaweyn. Balse xeerarka caymiska ilkaha ee Medicaid way kala duwan yihiin gobol kasta. Marka laga reebo daryeelka gurmadka degdegga ah ee ilkaha, noocyada kale adeegyada daryeelka ilkaha uu daboolo Medicaid waxay ku xiran yihiim halka aad ku nooshahay.
Haddii aad haysato Medicaid iyo Medicare labaduba, waxaa laga yaabaa inaadan ku qasbanayn inaad inaad go'aankaas qaadato. Qorsheyaasha caafimaadka ee laba geesoodka ah waxaa loogu talagalay dadka haysta Medicaid iyo Medicare labaduba. Oo inta badan waxaa ku jira caymiska ilkaha.* Taasi waxay samayn kartaa isbeddel weyn oo ku yimaada miisaaniyadaada iyo caafimaadkaaga labaduba.
Sharraxaada caymiska ilkaha.
Kahor inta aadan isku diiwaangelin qorshe kasta oo caafimaad, way wanaagsan tahay inaad si sax ah u ogaato waxa ay ka dhigan yihiin macaashyada iyo camiska. Waa kuwaan noocyada kala duwan ee daryeelka ilkaha ee laga yaabo inaad rabto inaad hubiso inuu daboolo qorshahaaga:
Baaritaanada iyo nadiifinta joogtada ah. Inta badan qorshayaasha caafimaadka ee laba geesoodka ah waxaa ku jira $0 lacagta go'an ee caymiska ee loogu talagalay baaritaanada caadiga ah, oo ay ku jiraan nadiifinta iyo dayactirka cirridka iyo lafaha taageero. Taasoo loola jeedo inaad booqan karto dhakhtarka ilkaha si aad u nadiifiso iyadoo aan kharash dheeraad ah kaaga bixin.
Raajooyinka ilkaha. Dhakhaatiirta ilkaha waxay isticmaalaan raajo si ay si faahfaahsan ugu eegaan caafimaadka afkaaga. Waxay eegi karaan salka ilkahaaga iyo lafaha ku xeeran, iyo sidoo kale buuxinta, kabista iyo beerista ilkahaaga. Raajooyinka sidoo kale waxay ka caawiyaan dhakhaatiirta ilkaha inay helaan ilkaha bololka ah iyo godadka.
Daawaynada foloraytka. Waa qaab degdeg ah, oo aan xanuun lahayn oo kaa caawin kara inaad ilkahaaga ka ilaaliso godadka iyo boloka.
Dhibcaha adeegyada ilkaha. Caadi ahaan, bukaanadu waxay bixiyaan qayb ka mid ah kharashka buuxinta, kanaalka, beerista iyo adeegyada kale ee ilkaha. Balse qaar badan oo ka mid ah qorshayaasha caafimaadka ee laba geesoodka ah ayaa waxay leeyihiin dhibco si ay gacan uga gaystaan bixinta adeegyadaan daryeelka ilkaha. Qaar ka mid ah qorshayaasha caafimaadka ee laba geesoodka ah waxay xitaa leeyihiin dhibcaha ilkaha.
Ilkahayaga ayaa qayb weyn ka ah sida aan u egnahay. Waxaana laga yaabaa inay aad u sahlanaato inaad fiicnaan dareento marka aad u roonaato ilkahaaga. Dhoola-cadeynta fiican waxay wanaajin kartaa kalsoonidaada. Taasina waxay ka dhigi kartaa mid fudud oo aad loogu raaxaysan karo isdhexgalka dadka sidoo kale. Ha seegin helitaanka caymiska ilkaha haddii aad u-qalanto Medicaid iyo Medicare, arag caymiska ilkaha ee aad ka heli karto qorshaha caafimaadka ee laba geesoodka ah.
Si aad u ogaato nooca saxda ah ee caymiska ilkaha ee aad ka heli karto qorshaha caafimaadka ee laba geesoodka ah ee UnitedHealthcare, ka raadi goobtaada.
*Fadlan ogow in macaashyada gaarka ah ee qorshayaasha caafimaadka ee laba geesoodka ah ay ka kooban yihiin ay isbedeli karaan iyadoo ku xiran tahay halka aad ku nooshahay.